Xog iyo Gorfeyn:- Doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo rajada Xasan Sheekh ee dib usoo laabashadiisa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xog iyo Gorfeyn:- Doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo rajada Xasan Sheekh ee dib usoo laabashadiisa
Waxaa is-badel aan caadi ahayn uu ku yimid saadaashii doorashadda madaxtinimadda Soomaaliya, kadib markii lagu soo baraarugay qaabkii ay ku dhacday doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo maalintii shalay ka dhacday xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku tartamaayay illaa 4 musharax, waxaana wareegii koowaad doorashadaasi ku guuleystay Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo hore u ahaa guddoomiyaha baarlamaankii xilligiisa dhamaaday.
Prof. Jawaari oo muddooyinkii ugu dambeysay loo saadaalinaayay inuu doorashada markale ku guuleysan doonno ayaa halmar laga war-helay inuu wareegii koowaad kusoo baxay doorashadaas, kadib markii uu ka guuleystay musharixiinta kale ee doorashada kula tartameeysay.
Hadaba, guusha Prof. Jawaari ayaa la dhihi karaa waa mid saameyn weyn ku leh musharixiinta ku loolami doonta xilka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxayna guushiisa sidoo kale daaqada ka saareysaa rajadii uu madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ka lahaa tartanka doorasho ee xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa la sheegayaa inuu lacag badan ku bixiyay sidii uu doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ugu soo bixi lahaa musharaxa C/rashiid Maxamed Xidig oo ahaa musharixii Prof. Jawaari doorashada kula tartaamayay.
C/rashiid Xidig oo sidoo kale inta badan la sheego inuu ahaa musharax ay dowladda Itoobiya hoos ka wadatay, ayaa hadane uljeedka uu Shariif Xasan ka lahaa inuu doorashadaasi kusoo baxo C/rashiid Xidig ayaa ahayd, si uu isaga uga qeyb galo doorashada madaxtimada Soomaaliya, maadaama Prof. Jawaari iyo isaga ay hal beel kasoo wada jeedaan.
Sidoo kale, hadal haynta ugu badan oo maalmihii ugu dambeysay la hadal haayay ayaa ahayd in siyaasiyiinta iyo bulshadda caadiga ay isla dhex-marayeen in markale dib loogu noqdo saadaasha xisaabtanka natiijadda laga filan karo doorashadda xilka madaxweynaha Soomaaliya oo haatan u sharaxan musharixiin aad u badan.
Dadka siyaasadda falaanqeeya ayaa si aad u rumeysan in guusha Prof. Jawaari uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 100% u arko in fursad dahabi ah oo markale lagu soo dooran doono ay u tahay, balse waxaa arrinkaasi mid ka duwan qaba dadka sida weyn uga soo horjeeda hankiisa xil doonka ah iyo dib usoo laabashadiisa.
Dadkaas ayaa aaminsan in markaan uu Xasan Sheekh Maxamuud ku hungoobi doono doorashada la filaayo in daba-yaaqada bishaan Janaayo ay ka dhici doonta dalka.
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno saraakiil ku sugan xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa inoo sheegay in hamiga madaxweyne Xasan Sheekh uu sii yaraaday, kadib markii doorashadii maanta oo ka dhacday xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, kaas lagu soo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo laabad ee baarlamaanka Soomaaliya.
Labada guddomiye ku-xigeen ee maanta la doortay oo kala ahaa C/weli Sheekh Ibraahim Muudey iyo Mahad Cabdalla Cawad ayaa la sheegayaa inay si weyn uga soo horjeedaan dib usoo laabashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taas oo hoos u dhigi doonta rajada weyn uu Xasan Sheekh ka qabo inuu markale doorashada kusoo baxo.
Doorashadda xilka madaxweynaha Soomaaliya oo dhici doonta dabayaaqadda bishaan Janaayo ayaa u muuqata mid aan ku koobnaan doonin oo kaliya codadka xildhibaanada wax dooranayo, balse ay jiri doonaan fara-gelin ka imaan karta gudaha iyo mid dibadda ahba, kuwaas oo doorashada ka hagi doona masraxa siyaasadda gadaashiisa.
Su’aasha inta badan oo ay haatan dadka isweydiinayeen ayaa ah musharaxee ku guuleysan doonna doorashada madaxtinimada Soomaaliya?
Inta badan dadkaasi ayaa isku raacay in doorashada sanadkaan uu ku guuleysan doonno mid ka mid ah musharixiinta doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkaan, kaas oo hore xil sare uga soo qabtay dowladihii hore ee dalka soo maray.
Arrintaasi ayaa filanwaa ku noqon doonta inta badan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa haatan aaminsan in musharaxaas aanay wax cod ah ka heli doonin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya.